3 DZIDZO DZAKANAKA DZOKUDZIDZISA MAKANGI ANOGONESWA - Nhanho NENHATU | Mhizha On
3 Pfungwa DZAKANAKA DZOKUGADZIRA MAKANANGI ANOGONESEDZWA - DANHO NENHANHO
Irene Gil | | Decoration, Crafts, Kudzokorora
Mune izvi Tutorial ndinokuunzira 3 mazano kudzokorora makotini uye wozvishandura kuita zvinhu zvakanaka zvekushongedza zveimba yako. A tishu bhokisi, UN kenduru uye a vase yakaturika yauchazopa nayo yechipiri hupenyu kune izvo zvinhu izvo zvaizoraswa.
2.1 Tissue bhokisi
2.3 Hanging vase
Kuti uite izvi mhizha tichashandisa sezvinhu zvakajairika zvinhu magaba. Pamusoro peizvi, iwe unozodawo zvinotevera zvinhu:
In inotevera vhidhiyo-dzidziso unogona kuona nhanho nhanho yeimwe yeiyo 3 mazano ane magaba. Izvo zviri nyore kwazvo uye iwe unogona kuona maitiro avo zvakadzama.
Ngatiendei pamusoro nhanho kutevera kubva kune yega yeiyo mhizha saka hapana chaunokanganwa uye unogona zviitire iwe kumba
Kuzviita tishu bhokisi iwe uchazoda gaba rine tapa, senge yekofi dzacho kana mamwe makuki. Unofanira kuita kucheka muvharo muchinjikwa, sezvo ndimo muchabuda mahengechepfu.
Tichashongedza gaba racho ne mapepa akanyorwa. Iwe une zviuru zvemagadzirirwo, saka tsvaga imwe inoenda nekushongedzwa kwemukamuri kana iyo yaunonyanya kufarira. Cheka kune saizi yegaba uye unamatire nayo pfuti silicone.
Munyaya ye kenduru isu tinoshandisa a can ye tuna, kunyangwe iwe uchikwanisa kushandisa chero mhando yeroti. Sarudza zvimwe mataira izvo zvaunofarira uye unamate nazvo silicone kwese kwekunze kwetende. Paunenge uine chakavharwa nematiles, isa iyo simende yezvinyorwa na a spatula uye rega rizorore 20 maminitsi. Mushure menguva iyoyo unogona zvakajeka iyo mosaic ine chipanje kana jira.
El vase yakaturika zvirinani uzviite ne refu inogona. Sanda iyo pamucheto kuti zvisakucheka uye Chenesa zvakanaka nemucheka. Penda iyo ne pendi yechoko yekutarisa kwevintage ine chaki pedzisa. Isa a waya kuitira kuti iite semubato.
Kune chikamu chatiri kuzosungirira iwe unozoda a puranga rehuni. Ipende iyo kune yako kufarira uye sikora a hook yekushongedza. Kubva kumashure iwe unofanirwa zvakare kumonyorodza a chindori chimwe chete. Iwe unongofanirwa kuisa iyo maruva mugaba rako uye rirembedze kubva pachirauro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » 3 Pfungwa DZAKANAKA DZOKUGADZIRA MAKANANGI ANOGONESEDZWA - DANHO NENHANHO
Kadhi rekukoka vana rekuzvarwa